Nezvedu - ANYWIN CO., LIMITED
Neraki, fekitori yedu kusvika pamusoro pe2 ye organic fetiraiza facotry muChina. Iine huwandu hwegore rekugadzira huwandu hwematani emamiriyoni gumi, mana manajini ekugadzira ari muMongolia, Xinjiang neJilin matunhu. Iyo fetiraiza inowanzo iine Amino Acid, Humic Acid, yepakati uye yekutsvagisa zvinhu nezvimwe, Icho chigadzirwa chinogadzira icho chine zvinhu zvinobatsira, zvinhu zvehupenyu, hutano hwakakwana, uye nesainzi fomula.
Chikwata chedu chinotarisa mukuvandudza kuvandudza & mhando.
Tarisira mberi kwenguva-refu pamwe newe!
Yedu Sevhisi Inopa Kune:
> Kushanyira fekitori
> Yemahara sampuro
> Chiremera chekuongorora chirevo chehunhu (seSGS).
> Zvinyorwa, Batsira kubata mvumo yekuwana yepasirese. (SeEcocert).
> Kubhadhara kubhadharisa, Yakatemerwa kiredhiti muganho wevane nguva-refu vakabatana mutengi. (Nguva).
> Tekinoroji & kutengesa, MaSainzi ekushandisa / zvigadzirwa zvekutengesa munzvimbo kuti uwane mhedzisiro.
> Tumira rutsigiro, Ruzivo ruzivo timu, rega yakachena tsika nekukurumidza uye zvine musoro.
> Kuchengetedzwa kweMusika, Kuchengeta iwe kukwikwidzana mukana wezvinhu zviri munharaunda. (Dunhu & mutengo).
Organic uye Inorganic Remubatanidzwa Fertilizer:
> Spray granulation tekinoroji ita kuti kutaridzika kuve kwakanakisa kutengesa & kurega fetiraiza ive nyore.
> Organic kusanganiswa kweinorganic fetiraiza, inokurudzira iyo zvinovaka muviri uye yepakati & yekutsvaga zvinhu zvinowedzeredza ivhu.
> Makore makumi maviri maindasitiri ruzivo, Tarisa pane organic fetiraiza.
> Kusvikira kuTop 2 yezvigadzirwa zvemuchina MuChina.
> Kupfuura 1 Miriyoni M / T yekugona kugona kwegore.
> Sarudzo yakanakisa yezvekurima: kurima zvakasvibirira, kusasvibisa, kusimudzira kusimukira.
> Fetiraiza ine maamino acids, inokurudzira kubereka kwoutachiona & kuvandudza mhando yevhu iyo inowedzera mhando yezvirimwa, kuravira & kukosha, kuramba nharaunda yakaoma
> Fetiraiza ine humic acid, inodzikisira simbi inorema muvhu, inoburitsa phosphorus & potasium, chengetedza ivhu rekuchengetedza mvura, inoshanda fetiraiza, chirwere chekudzivirira, Kuti uwedzere goho rezvirimwa.
Bulk Organic Fertilizer Vanopa, Humic Acid Organic Fertilizer, Organic Fetiraiza Yekudyara, Organic Compound Fetiraiza, Organic Fertilizer Kugadzira, Organic Fetiraiza Mugadziri,